Haweeneey koomo ku jirtay 14-sano oo cunug isbitaal ku dhashay iyo booliska oo kiiskan yaabka badan baarayaan. – Filimside.net
Haweeneey koomo ku jirtay mudo 14-sano ah ayaa cunug ku dhashay isbitaal ku yaalo Hacienda HealthCare magaalada Phoenix ee dalka Mareekanka xili ay iyada bukaan ahayd.
Booliska Arizona ayaa haatan kiiskan yaabka badan baarayaan madaama haweeneyda cunuga dhashay iyada bukaan ahayd waxaana kiiskan loo diiwaan galiyay xad gudub galmo sharci daro ah oo lagula kacay qof bukaan ah oo xaalad ogaansho la’aan ku jiro.
Sidoo kalena booliska waxay baarayaan aabaha cunugaan dhalay ayadoo hidaha sidaha ama DNA-ga laga baarayo waana kiis culus oo siweyn saxaafada u hadal heyso.
Haweeneyda aan magaceeda la carbaabin ayaa cunuga dhashay bishii hore December marka ay ahayd 29 sidoo kalena xaalad ahaan cunuga wuu wanaagsan yahay iyadana weli koomo ayay ku jirtaa waa bukaan oo aan ogaal dhameestiran laheyn.
Haatan gabi ahaanba waa la xadiyay hooyada aan ogaalka laheyn ama koomada ku jirto qolkeeda cidda booqaneyso sidoo kalena guud ahaan qolalka bukaanada Isbitaalka Hacienda HealthCare ku jiraan waxaa loo diiday ragga shaqaalaha ah inay kaligood galaan qolalka dumarka bukaanada ah ku jiraan waxaana qasab ah in shaqaale haween ah la socoto dhaqtar walbo oo lab ah oo bukaan dhidig ah booqanayo.
Waxaa Aqrisay 107